Libya: Afomanga No Nanamarihana Ny Herintaonan’ny Fahafahana Ao Tripoli · Global Voices teny Malagasy
Libya: Afomanga No Nanamarihana Ny Herintaonan'ny Fahafahana Ao Tripoli
Voadika ny 14 Aogositra 2012 12:42 GMT
Nankalaza ny fahafahan’ ny firenena tamin'ny fitondran'i Muammar Gaddafi nandritra ny 42 taona ny Lybiana androany alina. Nibahana tamin'ny resaky ny mpiserasera ny fankalazana ary nizara ny fihetseham-pony avy izy ireo tamin'izany.
Nifanindran-dàlana tamin'ny faha-20 andron'ny Ramadana, volan'ny fifadiankanin'ny Miozolomana ny androany alina, andron'ny fahafahana tao an-drenivohitra Libyana, Tripoli sy andro nandrodanana ny fangejan'i Gaddafi, Bab-Al-Aziziya. Andro manamarika ihany koa ny famidràna fahefana nataon'ny Filan-kevitra Nasionalin'ny Tetezamita, izay nitantana ny raharaham-pirenena nandritra ny herintaona, ho an'ny Filan-kevitra Ankapobe Nasionaly, izay voafidy tamin'ny volana Jolay 2012.
Akram namariparitra ny zava-nitranga tao Tripoli. Hoy izy nanoratra:
@flyingbirdies: Tsingerintaonan'ny fahafahan'i Tripoli androany alina & famindrana fahefana nataon'ny NTC ho an'ny #GNC . Natomboky ny vahoaka tamin'ny alalan'ny afomanga ny fankalazana #Libya
Ismael nanampy hoe:
@ChangeInLibya: Mankalaza ny herintaonan'ny fahafahana i Tripoli amin'ny alalan'ny vavaka ho an'i Syria, afomanga & fampisehoana goavana ho amin'ny fihavanam-pirenena tao amin'ny kianjan'ny Martiora
Tao amin'ny Facebook, nizara fihetseham-po maromaro izy. Hoy izy nanoratra:
Mora adinoina ny zavatra sasany, ary mitady ho very any amin'ny olo-malaza lehibe ny tantaran'ny olona tsirairay, indrindra raha tena zava-dehibe noho ny fahafahan'i Tripoli izany.
Na dia izany aza, tahaka ny Libyana manaraka ny revolisionina isa-minitra, sy ny olona manana havana ao Tripoli, mino aho fa ilaina ny fampatsiahivana ny andro tahaka izao, fa raha tsy ho amin'ny firaisantsika na ny fiaretana nahazo antsika nandritra ny ora sarotra tao Libya, tsy nisy antony ahatongavanay eto androany hankalaza ny faha-20 andron'ny Ramadana ao amin'i Libya afaka, azo jerena na aiza na aiza manodidina antsika ireo lesona azo tsoahina tamin'ireo ady hafa sy ny revolisionina tsy nahomby, ka tokony hisaotra an'Andriamanitra foana isika amin'izay hananantsika:
Tamin'ny faha-20 ny volana Aogositra 2011, nifoha tamin'ny torimasony ny Libyana, taorian'ny fikarakarana nandritra ny volana maro sy ny fitaovam-piadiana tonga tao Tripoli. Avy tany Benghazi, Misrata, sy ny tendrombohitra Nafusa ary koa tany Tonizia avokoa ny fitaovam-piadiana, tsy ampy fitaovam-piadiana hoentina hiarovan-tena ny tao an-toerana rehefa tonga sasakalina. Inona no tsy hananany, na izany aza, ampy nanafihana sy nanalavirana hatrany ireo tafiky Gaddafi izay diso fanantenana tamin'ny fandresena tamin'izany fotoana izany.
Ny firaisan'ny Libyana no antony nahazoana ny fandresena, teo koa ny fahitana ny hafalian'i Benghazi, Misrata sy ny tanàna hafa izay nahatonga ireo olona tao Tripoli nanana fanantenana tamin'ny andron'ny fahafahana, izay azo ihany taoriana ny ady sarotra naharitra enim-bolana.
Androany, tonga eo amin'ny fahefana ny kongresy voafidim-bahoaka, ary tokony hotsarovantsika ireo olana resin’ i Libya, sy ireo olana mbola hatrehiny ihany koa. Tsy afaka hiady amin'izany olana izany isika raha tsy miasa miaraka ny vahoaka, sy mirahiana ary manao zavatra ho an'ny firenena ka tsy miandry takalony eo no eo.
Tao amin'ny Twitter indray, Rawia El-Turki nanoratra hoe:
@R_ProudLibyan: Hafakely tokoa ny mahita ny fahasamihafan'ny faha- 20 andron'ny Ramadana tamin'ny taon-dasa raha oharina tamin'ity taona ity… mandeha hainganatokoa ny fotoana.
Nusaybah Khalil nanantena fa:
@FromNusaybah: Androany 8 Aogositra 2012, mangina ny tsikera #Libya momba ny revolisionina Libyana (antenaina) ho mandrakizay. Fanombohan'ny politika vaovao izany.
Jomana Karasheh nampatsiahy antsika hoe:
@JomanaCNN: Tao anatin'ny fotoana fohy, vaovao ny tantara momba an'i #Libya, tetezamita milamina voalohany eo amin'ny fanjakana hatramin'izay taom-polo izay, nanatrika ny fankalazana ny #NTC izay namindra ny fahefana tamin'ny GNC